ग र्भअवस्थामा सं भोग गर्नु हुन्छ की हुँदैन ? – Jagaran Nepal
ग र्भअवस्थामा सं भोग गर्नु हुन्छ की हुँदैन ?
काठमाडौं । विवाह भैसकेपछि संभो गक्रिया प्राकृतिक कुरा हो । तर कतिपय श्रीमान् र श्रीमतीहरुको त सं भोग को आनन्द अपनाउन नपाई गर्भ रहेको पनि हुन्छ । यस्तोमा बच्चा जन्माउनु पनि महत्वपुर्ण ठान्ने जोडीहरुका लागी सं भोग गर्न नपाएको तना वपनि हुन सक्छ ।
तैपनि ग र्भ बसिसकेपछि त्यसलाई रा म्रोसंग जन्माउनु हरेक आमा बाबुको कर्तव्य हुन जान्छ । तर गर्भको अवधी ९ महिना लामो हुने भएकाले यत्रो अवधीसम्म श्रीमान् श्रीमती एक अर्कासंग से क्स नै नगरी बस्न पनि संभव छैन् ।
खासगरी यो बेलामा पुरुषहरुमा आउने काम वा सनाको उत्ते जनालाई कसरि संबो धन गर्ने सवाल नै प्रमुख हुन्छ किनकी महिलाको निम्ती त ग र्भ नै सबै कुरा हुन्छ । यस्तो बेलामा पुरुषहरुको ‘पर स्त्री ग मन’ लाई रोक्न भएपनि नचाहेरै पनि महिलाहरु यौ नसं पर्कको लागी राजी हुने गर्छन् । यसो गर्नु ग लत मात्र होइन । यसले गर्दा पेट भित्र हुर्किरहेको शिशुको लागी पनि अस्व स्थकर हुन्छ ।
गर्भावस्थामा अरुबेला भन्दा धेरै थका न महशुस हुने, निन्द्रा लाग्ने तथा झर्को लाग्ने आदि कारणहरुले गर्दा यौ नस म्पर्क गर्नको लागि महिलाहरु तयार नहुन पनि सक्छन् । यदि तयार छैनन् भने यौ न सम्प र्कका लागी कुनैपनि पुरुषले दवाव दिनु गलत हो । यो समय न त कुनैपनि पुरुषको लागी मर्दांगी देखाउने समय हो, न त सन्तु ष्टि को बारेमा सोच्ने समय नै हो । यति हुँदा हँुदै पनि यदी गर्भ वती महिला पनि संभो गको लागी तयार हुन्छिन् भने, यौ नसंपर्क गर्दैमा केहि नेक्सा न भने हुँदैन् । गर्भा वस्थामा यौ न संप र्क राख्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ ।
१. महिलाको चाहना छ वा छैन् ? यदि महिला यौ नसं पर्क गर्न रुचाउदिनन् भने उनलाई फोर्स नगर्नुस् ।
२. यो बेलामा महिलाको सन्तु ष्टिको लागी नसोच्नुहोस् केवल उनलाई सजिलो पारिदिनुहोस् ।
३. सं भोग गर्दा पेटमा अलिकतिपनि वजन पार्नुहुँदैन् । केवल लिं ग र यो नीको घर्षण कसरी हुन्छ त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिन जरुरी छ ।
४. धर्मशास्त्रका अनुशार ग र्भवती स्त्री ले स्ख लीत हुनु राम्रो संकेत होइन । त्यसैले तेती ञ्जेल केवल बिर्य स्खलन कतिबेला हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । ज ति चाँडो बिर्य स्ख लन हुन्छ त्यति नै छिटो यौ नसंप र्क पनि सकिन्छ ।
५. पेटभित्र शिशु एउटा पा नी झिल्लीमा सुर क्षीत रुपमा रहेको हुन्छ । यस झिल्लीको मुख यसरी बन्द हुन्छ की बाहिरको कुनै पनि कुराले उसलाई असर गर्दैन तर पेटमा धक्का पुग्दा, महिलाको मनस्थिती क मजोर पर्दा भने खतरा भन्दा खाली पनि हुँदैन् ।